वेब प्रस्तुतीकरणका लागि वेब २.० Martech Zone
सोमबार, मार्च 17, 2008 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
मैले भर्खरै मेरो प्रस्तुति साझा गर्न चाहेको थिएँ जुन मैले गरेको थिएँ तीव्र दिमाग। हामीसँग केहि ठूला स्थानीय कम्पनीहरू छन् जुन उनीहरूले कसरी व्यवसाय लाई बढावा दिनको प्रयासमा ब्लगि and र सोशल मिडिया प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर जान्न खोजिरहेका थिए। यहाँ प्रस्तुतीकरणमा धेरै छैन - यो प्रायः म कुरा गर्दै थिए, साईटहरू र प्रस्तुतीकरण बीच पछाडि पछाडि पछाडि।
यो एक नयाँ PowerPoint / Kynote विषयवस्तु हो जुन मैले डिजाईन गरें, यद्यपि!
टैग: व्यापारकिनोटशक्ति बिन्दुप्रस्तुतितीखो दिमागस्लाइड शो2.0 वेबवेब २.० व्यवसायका लागि
मार्स 18, 2008 मा 6: 03 एएम
प्राय जसो पटक, म केवल फारममा टिप्पणी गर्नेछु, सामग्रीमा होइन।
पहिलो स्लाइडमा म वेब २.० प्रभाव थप्न सक्दछु, जस्तै शब्दहरू प्रतिबिम्बित गर्ने, र "व्यवसायको लागि" एक चम्किलो ताराको रूपमा।
अन्य स्लाइडहरूको धेरै धेरै पाठ छ। KISS। तपाइँ तपाइँको दर्शक तपाइँको कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ, स्लाइडबाट तपाइँको पुनरावृत्ति पढ्नुहुन्न। सरलता मुख्य शब्दहरू हुन्।
"ईतिहास" स्लाइडमा मनपर्दा, वेब १.० को प्रतिनिधित्व गर्ने एक सादा छवि मात्र हुनुपर्दछ, र त्यसपछि वेब २.० को प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ स्लाइड। तपाईं शब्दहरूद्वारा सबै विवरणहरू वर्णन गर्नुहुन्छ, स्लाइड द्वारा होइन।
मार्स 18, 2008 मा 8: 27 एएम
राम्रो सल्लाह, मार्टिन! मलाई थाहा छ मान्छेहरूले भिजुअललाई शब्दहरू भन्दा धेरै सम्झिन्छ, त्यसैले मसँग यी प्रस्तुतीकरणहरू ट्वीक गर्ने छन् सुनिश्चित गर्न मसँग ती दृश्यहरू पछि छन्। धन्यवाद !!!
मार्स 18, 2008 मा 8: 42 एएम
स्लाइडसेयरले तपाईंलाई तपाईंको प्रस्तुतीकरणमा अडियो थप्न अनुमति दिन्छ। त्यो राम्रो छ।
मानौं कि धेरै व्यक्ति पोडकास्टहरू समात्नका लागि itunes प्रयोग गर्छन्; तपाईं पनि विस्तारित Poldcast को रूपमा वितरण गर्न सक्नुहुन्छ।
मार्स 18, 2008 मा 8: 30 एएम
एउटा चाखलाग्दो नोट - यस्तो देखिन्छ कि स्लाइड्सरेमा केही प्रकारको क्यासिंग म्याकेनिमेसन रहेको छ। कहिलेकाँही मेरो पहिलो संस्करण देखा पर्दछ, अर्को पटक मेरो दोस्रो संस्करण गर्दछ। मलाई लाग्छ कि मैले 'अपडेट' गर्न रोक्नु पर्छ र सट्टामा 'संस्करणहरू' राख्न थाल्छु।